Qodobbada Kyle Christensen ee Martech Zone |
Maqaallada by Kyle Christensen
Xusuusnow markii shirkadda Nike soo bandhigtay ololeheeda Just Do It? Nike waxay awood u yeelatay inay ku guuleysato wacyigelin ballaaran iyo miisaan leh hal-ku-dheggan fudud. Boorarka, TV-ga, raadiyaha, daabac… 'Just Do It' oo Nike swoosh ayaa meel walba taagnaa. Guusha ololaha waxaa si weyn u go'aamiyay inta qof ee shirkadda Nike u heli karto inay aragto oo maqasho fariintaas. Qaabkan gaarka ah waxaa adeegsaday noocyada ugu waaweyn xilligii suuq-geynta ballaaran ama 'xilligii ololaha' iyo guud ahaan